Nokubonakaliswa Iindibano — UHAMBO LEE
Ndandibukele inkoliso iindibano ezopolitiko ezi veki zimbini zokugqibela. Isithethi loluntu kum Zisuke kodwa phezu-ukuhlalutya imiyalezo nezakhono ngamaciko abaviwa kunye nabaxhasi babo. Wonke umntu Ngeloxesha wazama ukucenga kuni amabali kunye / okanye ezithembisa.
Ndiza kuvuma, eminye iminqweno yabo zazintle, kodwa uninzi iintetho ndandiziva ubalwe, ezingenanto, ndikunyibilikise ezopolitiko- kum ubuncinane. Ezinye iingongoma bethetha zazingqalile kakubi kakhulu. Kodwa elona amaqonga ayikho ingongoma esi sithuba.
Enye yezinto Ndaqonda ukuba ngelixa amaqela bebezama ukuthengisa abaviwa babo, ukuba uzama ukuthengisa zelizwe labo. Ngokutsho kwabo, propserity impahla kwilizwe ledinga, kunye neqela labo ufuna ukuba uMoses wakho. Ngenxa yabo, ubomi ezilungileyo kukufumana esisityebi xa usebenza nzima, kwaye mvotelwa yabo enguMsindisi ngubani angakusa khona.
Kaloku akukho nto sisono ngayo ubutyebi. Yaye kuvuzwa yiNkosi ngomsebenzi onzima yinto elungileyo, kodwa loo nto kuba apho ubuxoki zethu ithemba. Ubutyebi akufuneki njongo yethu ekupheleni, kufuneka ibe yindlela ukuya ekupheleni enkulu. Kwakhona awunako ukuba ukukholosa umntu nje ukugcina usuku.
Abaviwa ukwenza ubomi lula kuthi kulo mhlaba (xa iingcamango zabo emsebenzini), kodwa ke ngeke ithemba lethu ekugqibeleni. A nga neengcambu ihlabathi lethu konke ukubandezeleka, okanye kuzisa uxolo ngokupheleleyo. UYesu kuphela ukwenza ukuba. Kwaye Yena uya.
Nceda ningandiva. Le nto ikhuthaza ukuba ngoyaba kwezopolitiko. ngokobuqu, Ndiceba ukuhlawula ingqalelo ugqatso kamongameli, kwaye ndiza kuzama ukwenza isigqibo ngokuba ngubani ukuvotela ngoNovemba. Ndikhuthaza ukuba wenze okufanayo. Mna andikanyuki, ndisithi musa ukuvota, Mna ndisithi musa ukuthenga kwi ubuxoki.
Ubomi olungileyo eziphathekayo, nabaviwa zezopolitiko abuzinzanga ngokwaneleyo ukwakha ubomi bakho phezu. Ubomi entle uhlala ngokholo kuThixo kulungile nokwakha ubomi bakho kuye.
Ya'Lisha Wooden • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:12 mna • impendulo
Ewe I ngokupheleleyo ukufumana into oyithethayo wena kuba ndiyazi wonke ke ngoko hyped phezulu malunga ukubukela iindibano kunye engqondweni yam i kwakufana nokuba indlela uya uThixo uza ukwenza izinto ngendlela yakhe…Kwakhona abantu kufuneka baqonde ukuba umntu omnye akakho ophethe karhulumente. Ukuba wahlawula ingqalelo esikolweni kwibakala Congress ngokwenene esilawula urhulumente kwaye yenze isigqibo ukuba urhulumente ukuze ngathi musa uzibe kwiipolitiki, kodwa ukunikela ingqalelo wazi ngentliziyo yakho ukuba uThixo nguye olawulayo…. kwaye benze uphando ngokwakho ngemiba ekuxoxwa ngawo omabini amaqela ngokunjalo thina nzima ukuya nje kude bathetha ucinga ukususela sivakala silungile kuhle…kufuneka ukuba uphando…siye bafundiswa ukuba esikolweni ngesizathu (Utitshala elizayo bephuma me..Lol)
ChristineRs • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:12 mna • impendulo
EWE! I mandla (okanye ubuncinane, KUFUNEKE KU) kwizandla zabantu, kodwa sinikela kude ezo inkululeko kurhulumente nokuba benze izigqibo egameni lethu…
Ndikhetha sihlolisise oko kumaxwebhu ngokuchaseneyo koko kuthethwayo. Abantu yaye bathi izinto gubhu up imvakalelo. Uyazi yintoni i 'iqela’ imele koko iqonga yabo. Kufuneka njalo kwabo eziyalela… nje kufuneka njalo eBhayibhileni, umgaqo-siseko, Declaration of Independence, Bill of Rights, etc. Xa ibekwe kwiphepha, kube nzima ukuba backtrack ngezithembiso ezenziwa ngexesha lonyulo.
Pastorextreme • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:13 mna • impendulo
Ngokusekelwe kwi oko iBhayibhile ikutshoyo Ngobufanasini, Ukutshata kunye Ukuqhomfa kukhetha lula!!!
matthew Hall • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:14 mna • impendulo
Andivumelani ukuba ukhethe phakathi kwezinto ezimbini, ukuba ingqwalasela yethu kukuba emxinwa, kulula. Ndingathanda ngokwenene ukuze abone oko kuza kwenzeka xa amaKristu ayeke ukudlala ilungelo / umdlalo ekhohlo wahlola sibone oko uThixo wathi ngemiba ngaphaya abo ezicacileyo ngakumbi nje ekhankanywe – imida-alinikwe nguThixo karhulumente umzekelo.
ChristineRs • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:14 mna • impendulo
Ukungabi nge ekhohlo nasekunene, kwiingcinga zam. Ukuba imiba enkulu musa kukulayinisha phezulu, Kucaca ukuba abo ayibonakali ngeke… ngokubhekiselele kwiinkqubo zikarhulumente okanye urhulumente, yintoni na uvakalelwa indima yazo?
Into yokuqala ukuqaphela phambi kokuba ingxoxo enjengale nto ukuba umahluko phakathi Church and State. Zombini ezi uThixo ngenxa engaphambili, amaziko kunye iindima ezahlukileyo.
Oku sekuthethekile, iBhayibheli, ubheka kum ngokungathi iinkqubo ezininzi ukuba urhulumente ngoku ubaleka Okunene kuwa phantsi kolawulo lwayo ezineenjongo kwakunye ukuba babe. UThixo sikhathazeke kuphela iinjongo zethu kodwa ngezenzo zethu. Nantsi imizekelo embalwa. Welfare, ukhathalelo lwempilo, Ukhuseleko lasekuhlaleni, medicare, kwaye zonke izinto ezinento yokwenza ukukhathalela abantu bawe kuqala umntu ukuba athathe uxanduva self wakhe, okwesibini intsapho ukuba loo mntu akakwazi, yaye okwesithathu abo abanayo intsapho (abahlolokazi neenkedama) eBandleni. Imfundo uwela usapho (Kamnandi 6) kwaye ke ibandla apho UThixo undimisele ootitshala kunye nabefundisi (okanye nabaLevi OT). yimizekelo nje embalwa.
James Stevens • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:15 mna • impendulo
Ah, imiba football zakudala.
ngumKristu • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:15 mna • impendulo
Kodwa uYesu wayengatshongo kuye ukuba abuze ukuba izimvo zakho ku ubufanasini, umshado, okanye isisu xa ebuyela. Kodwa akazange athi ukuba abuze ukuba wondla abo babelambile, ze, ome. Ngoko ke ngaloo mvotelwa Ucinga ukuba kungenzeka ukuba ukulandela loo kwimiyalelo…
Rmyers • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:15 mna • impendulo
Ethethe KAKHULU ngokucacileyo ngaloo miba unciphisa! Simele sicinge njengaye. an YES, Mna nawe kufuneka ekondleni abalambileyo, ingubo ze, nokunyamekela abahlolokazi neenkedama, etc….Ingakumbi abo bamanywe kwabendlu yokholo….kodwa uYesu ndithi apho ukuba amisele urhulumente ukuba enze oko?? Ukuqhomfa bubomi nokufa…kubonakala kukho umthetho ngaloo. Umtshato ndisingisele kuKristu, ndisingisele nakulo ibandla…kufuneka sibe phambili urhulumente ntle kunye ngokwesondo abavukeli’ self engasentla ukuba? C'mon Christian, antliziyo onabo?
ChristineRs • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:15 mna • impendulo
Baphela uyavumelana… Ngelishwa, Mna ndivile abanye abelusi abathi (ku imithombo yeendaba) ukuba le miba kufuneka angamisela thina uvotele… Eyoyikisayo ungasafani?!
Tjambaya • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:18 mna • impendulo
Ubomi zilungileyo nokholo kuThixo Good?Ndiyamthanda Trip kunye negalelo lakhe umzimba kodwa ukuba oku uguqulelo lwakho ubomi Good ingqalelo impembelelo wakho ukuba ndithi mna kudana ngenxa yokuba ubomi ezilungileyo kum kukuba nolwalamano nabo God.In amazwi kaYesu “Mna ndize abanike ubomi kunye nobomi, obona buphelelyo kwaye oku ubomi ukuba siyamazi lowo undithumileyo”.Thats oko uYesu said.And uYesu tryna ukubuyisela ukuba ubudlelwane yalahleka kumyezo wase-Eden eziquka nezibetho angaphezu ukusuka nolwalamano oluhle God.Areal noThixo uAdamu ukuba lokwenene yayo ukufunda nje ilizwi nokuqonda ukuthanda kwakhe thru ukuba,zalo ngokunxibelelana noThixo nokufumana amagama yokwenene athile ebomini bakho nabanako ayinakuqinisekisa kuba nantoni u yiva uThixo ukuba kwenzeka life.Its yokwenene nazo ezityelelwe uYehova kanye uAdam uDavide nabo bonke abo bangcwele ziyacinywa kwi Testament.Its New nabo uhamba noThixo njengoko ubone indlela esebenza ngayo ebomini bakho ebomini bakho kwinqanaba buqu u baqale ukuqonda into ifana apho kwakhona zobungqina ezithembekileyo ngu Scripture.For umzekelo uThixo kunceda u boyise engenalo meko uze thru ukuba u bazi uThixo nokukhululwa loo nto ngokwenene into eya kumnqabela yena uThixo,leyo bible kuthetha ntoni oko xa isithi uThixo wabonisa uMoses ways.There wakhe Ndisenezinto ezininzi zokuthetha akamazi uThixo mna don nexesha enuff okanye isithuba kuhlalutywe kuyo here.I awuyazi ezinye peops uya kucinga ophuma loo maKristu akuyo kwakhona kodwa ilizwi nokuqinisekisa ngokwembono yam.
josh • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:19 mna • impendulo
Ekuqaleni, Andinguye esithi umKristu KUFUNEKA uvotele eWisconsin. (ukufunda ukuba isigwebo ngenyameko ngokuphindaphindiweyo)
ngoku, Akuba etshilo ukuba, isizathu kuphela xa luza kumKristu ukuba uvotele Obama kukuba yena / waye alunalwazi imiba kwaye umntu.
moparfan54 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:19 mna • impendulo
Kuphela isidenge ubeka ukholo lwakhe emntwini eli hlabathi ukuba “ugcine” kwabo ubuhlwempu okanye nayiphi na enye ukugula ebomini babo, kodwa honisi iqela Othuka uThixo, kwaye sifune ngokubulala abamsulwa angena kubethwa ngoyaba. Ngoko ke pha kuphela(ukuba wena ikholwa) na umviwa Republican. Ndabeka Akukho nokholo Republican kodwa Ndibeka ithemba yaye sithandazela ukuba uYehova uza kubanceda babone indlela ilungelo ukulandela.
Veronica • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:19 mna • impendulo
UNdinguye ndisithi musa ukuvota. Musa uvote ukuba akukho omnye owenziwayo unenyaniso yaye kokuhlonipha, kuba ukuba uthe wenjenjalo, owuthengileyo kwi ukuya ubuxoki, okanye ukuba nje ukuthemba uThixo.
Rmyers • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:20 mna • impendulo
Veronica, iqela ngubani ogqiba uzoveza imigaqo-nkqubo yazo. isenzo sakho okanye yokungenzi KUYA kuchaphazela isiphumo. Enye platform ikhuthaza ephambene, ukufa ityala nabantwana bakho abo bahle ngabam kuya kufuneka ukuba baphile ukukhulisa abantwana. Omnye efuna ukuthintela ezi nembubhiso ukuba bazise, yaye alondoloze oko uThixo wabababala olu hlanga. izenzo ukholo – kuba zonke izinto ezilungileyo kwabanye nozuko lukaThixo. Iimaski ukungakholwa ngokwalo njengoko ukuhlonela nje.
Dr. Nathaniel Wilson, Sr • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:20 mna • impendulo
Inyaniso, ukubeka lo mba injalo nge inqubo eBhayibhileni!!! inkosi ikusikelele, kwaye iposi yakho basikeleleni abo wayifunda.
KODWA • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:20 mna • impendulo
Ukuba uvote ngokutsho kweBhayibhile, ngaphezu akukho mviwa uya kudibana ngokupheleleyo iimfuno zakho. Kwi ilungelo kukho iingxaki ubulungisa ezininzi (wabavela, abahluphekayo, amalungelo abasetyhini). Kwi ekhohlo kukho iingxaki yokuziphatha (umtshato gay, isisu, njalo) News flash: urhulumente Asiyo ibandla. Kungenxa yoko le nto bahambi babaleka England, yaye kutheni ukwahlulwa ecaweni kunye karhulumente yinto elungileyo (khangela imbali roman lelizwe). Kwakhona kufuneka uyeke semthethweni ikhowudi yethu yokuziphatha. UYesu wafa hayi umthetho lokulawula iintliziyo zethu, kodwa ukuba inkululeko kukumnqula ngoMoya nangenyaniso. Ukuba simelana umtshato Gay ukuba sifanele ukwenza ntoni njalo ngokunika ihlabathi imizekelo enkulu kwemitshato nesawo, endaweni rates mtshato e ngasentla 50 ekhulwini. Ukuba simelana izisu sifanele ukunika imali ezintandane nokunceda kwiinkqubo zoluntu ukunceda abantwana. Ngaba ukwenza umtshato gay utshintsho mthethweni iintliziyo? Hayi. Ngaba ukwenza izisu uncedo mthethweni umfazi ukukhulisa umntwana? Hayi. baya ukunqanda mhlawumbi isono ekudalekeni? Hayi. (Khumbula izisu kwenzeka ngeendlela engasokuze befor semthethweni kwenzeka). Makhe sithande abamelwane bethu bavote kunye siza kuchaphazela ngokukhetha ngabantu lemposiso kakhulu ukuqonda.
Rmyers • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:21 mna • impendulo
KODWA, sizathu nam apha: ngaba ukunyusa into bayayichasa nako? Kutheni ukudala iingxaki bobuxoki? Ngaba asimele kufuna ukuba umtshato sikwazi, unothando imbeko abafazi bethu (okanye kubayeni), kananjalo bathi uThixo ichazwe ngokucacileyo yintoni umtshato – kwaye inkcazelo akubandakanyi nako? Kwaye unika ezintandane ngokwenene EZINYE ukuba ukuyeka ukubulawa abantwana abangenatyala?? (wayeza ukuxhasa abamelwane bakho umntwana ukuzithethelela ukubulawa khe kwakho?)
Kwaye ke kukho FACT elula ukuba imithetho NGABA yokunqanda yokuziphatha – yiyo loo nto nabo! Hayi,ke ukuba deterents abalunganga, kodwa ukuba nithi ukuba kufanele “ukuyeka semthethweni ikhowudi yethu yokuziphatha” bayaphoswa ukuba umthetho kanye imithetho ikhowudi umntu yokuziphatha. Ngaba asimele kufuna impliment imithetho ezihambelana ikhowudi kaThixo yokuziphatha?
Le ngxelo kakhulu ugula ingqalelo wenze apha kufuneka, “UYesu wafa hayi umthetho lokulawula iintliziyo zethu, kodwa ukuba inkululeko kukumnqula ngoMoya nangenyaniso.” INYANISO – unqulo lwethu – ezimpilweni zethu lidini eliphilayo – kufuneka ngokutsho INYANISO Uye wazityhila. Indlela esiphila, zinto ke sizithethayo, ukukhuthaza, phikisa, kufuneka ZONKE njengamagama INYANISO (kubandakanywa umthetho Yakhe yokuziphatha) – okanye NOT Sinqula kuye njengoko kufanele, kodwa ndifaniswe noko sabantu beli hlabathi lingendawo.
UMOYA – unqulo lwethu (ukuphila kwethu) ke ukuba ngokuvumelana, yaye amandla, Umoya wakhe – Moya Lowo unika amakholwa ngokutsha, Moya mnye ubhala UMTHETHO wakhe ezintliziyweni zethu njengokuba isenza izidalwa ezintsha! EWE, UYesu NGABA kufa UMTHETHO lakhe lokulawula iintliziyo zethu – ukuba wayeza umthande yena ngentliziyo yethu yonke, ingqondo, umphefumlo, kunye namandla (i summation uMthetho), kunye nokukhuthaza ulwazi yaKhe (siwa ngokwenyaniso) njengoko uzivezile, kunye nothando ngaYe (kubandakanywa nomthetho wakhe).
Kutheni simele sibe bengenamdla oko imithetho siqalisa? Kutheni sifanele senze ngokungathi ukufa ziyafana ebomini? Oku kungekhona ukuba uMoya wakhe – kodwa enye. Oku akuthethi siwa ngokwenyaniso.
Charliemuldrow • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:21 mna • impendulo
Ndiyabulela kuwe ngenxa yoku. Ndiyavota ngokweLizwi. Andiqondi ndijonga ngqo kwi eqongeni ujonge abaviwa. Ukuba iqonga iye ni ukuba ichasene neLizwi, ngoko loo mviwa na ukwenza ivoti yam. Andiyi ukuxhasa iqela ogama imigaqo kunye nemigaqo ezi ngokucacileyo nxamnye noTHIXO ukuba ukukhonza. ithemba lam ayikho indoda okanye iqela lezopolitiko; ukuba uBawo osezulwini ondithandayo. Ubomi bam sisekelwe kuphela kuYe. Ukholo kuqala NJALO!
matthew Hall • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:22 mna • impendulo
iingcinga Great Uhambo. Ndiyavuma. Asikwazi ukukhangela ukuba umongameli ukuze asisindise okanye isizwe sethu. Usindiso luza ngokukholwa kuKristu, kwaye isiqhamo ekuthobeleni kuye kuya kubangela ukuba siphumelela siya okwangoku ayilindele indawo engalunganga.
Ucinga ntoni malunga ingcamango inkxaso abaviwa njengako indlela kakuhle ukuba ihambelane athatha iSibhalo kwimiba efana neemfazwe nje kwaye kolawulo lukarhulumente vs ukuba lo mntu, usapho, okanye Church?
ChristineRs • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:23 mna • impendulo
Itshiwo kakuhle… malunga abaviwa’ iinkolelo yokuziphatha kunye nenkxaso kwimiba ethile yokuziphatha ejongene eli lizwe, yintoni indima uyakholwa ukuba badlale ekukhetheni umvavanywa ukuba uvotele?
Emmanuel • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:23 mna • impendulo
Andiqondi ukuba Uhambo ukuphendula ngqo umbuzo wakho, kodwa ungakwazi ukuthatha sibange kuwo ukuba ufuna.
Ngokubona kwam, Ndiziva kancinane eqwengiweyo. NjengomKristu, Ndifuna ukuba uvotele best friend yeBandla, ngubani na oya kubona ukuba iimfuno zethu ziyalungiswa ukukhulisa uluntu aze abuyisele ezinye ingqiqo yokukhanya esizweni. neziyilimazayo lizwe Izinto ezifana isisu, kodwa andikwazi ukuba ubukho isisu ngendlela eyothusayo uya kulithoba ingqumbo kaThixo. Ukuba bekunjalo yoluntu iphelele ukuba, ukuba ngaphandle ezinkulu, Bendiya ukuba uThixo ukuba abe nenceba kuthi uthumele abathunywa ukuba sikholwe ukuba ukunika le sono. ukuba uthe, unyulo omnye wezopolitiko ngaphezu komnye ukunyanzelisa ukuba tshintsho kufuneka ibe isizathu omnye uvotele yona. Too Ndisoloko ndibona isisu nomtshato gay njengoko eyenza ukuba abantu basebenzisa ukunyanzela ukuba uvotele nokuba umviwa, ngubani, Cinga ukuba, kusenokwenzeka nokuba abe olukhulu nempembelelo loo nkqubo (okanye izinto ezinkulu epleyitini yakhe). I nje andifuni ukuba uxhatshazwa njengomKristu ukuba kukhethwa umviwa enye udaba olulodwa, usebenzisa uThixo njengokuba abanye uhlobo isando. Fact le nto thina ke musa ndazi oko uThixo aya kukwenza umntu omnye okanye isizwe esinye ngenxa yokuba isisu. Thina nje abazi.
Same uya kuba ubufanasini nomtshato gay. Mna nxamnye ubufanasini, kodwa andiyi ndiza essentialize oko ngokungathi sisono lelona liphezulu ehlabathini. (Kuthekani ukukrexeza esingafaniyo okanye umbulo? okanye ukudlwengula?) Ngaba edumisa uThixo? Hayi. Kodwa yintoni impembelelo na ngaloo ngaphandle ukunyanzelisa ezinye uhlobo utshintsho umphezulu yokuziphatha? Ngequbuliso nguThixo ukuba abe ekholiswa leyo, ngokungathi utshintsho kwentliziyo? Hayi. Ngaphezu koko, lo America, kwaye sonke ukhetho into ofuna ukuzenza ebomini bethu. Kwimeko, Isimilo sethu American kufuneka ukuba umntu angenza nantoni na abayifunayo, logama nje aziphazamisi kwi evuselela somnye. Ngoko ke umntu gay unokwenza into abafuna, logama nje musa ukuma kum ukuphila ubomi bam. Omnye umba okuvota kusekelwe kwimiyalelo inkonzo ukuchazwa: Kuthekani ukuba ngumpolitiki wonyulwa igunya wokubeka “nemiBhalo” imithetho, yaye elo lenza umGaqo kubo iphutha? Oku kuye wazama ngaphambili eYurophu, kwaye ndicinga ukuba sonke siyazi kumbi owangena. Naluphi na uhlobo nokubekwa ngurhulumente, nokuba ngenxa yezizathu zenkolo okanye wempangelo, ukuyekisa ukwenza into ofuna. Ukuba into ofuna kuyingozi omnye umntu, awukwazi kwenza nto. Kodwa ukuba urhulumente uya kude kakhulu, ukuze bayeke wenze into ofuna okanye ufuna ukuyenza nesazela esilungileyo. Thatha kwevangeli kwi uBukhosi baseRoma. Ekubeni umlawuli wabona yena njengeNkosi bafuna unqulo, evakalisa uYesu waba owambulala Nkosi. Kodwa ufuna yaye kwakufuneka enze oko. Isihlangu Yiloo kwezinye unyawo.
Ekugcineni, babekwazi ikuvumela ukuba ugqibe ukulandela uThixo ngokuzithandela kwakho. Kuvula i umnyango uThixo ukuba basebenze ngokukhululekileyo entliziyweni yakho, kuba izenzo ngaphandle akalandelwa kubizwa kuwe. Kodwa xa izenzo ngaphandle ukuba ifuna, nawe ngokulula kakhulu uya kuthabatha inzaliseko yezo zenzo njengophawu wobuxoki zokhuseleko. Njengokuba, amaninzi kwindawo endihlala kuyo bacinga ukuba bakhonza uThixo favor ungabonisi ecaweni, okanye ukuba ukuya ngokusoloko kuthetha ukuba uya ezulwini. ngamanga zokhuseleko. Kwaye ke ndizekeleni ibe womshumayeli weendaba ukubaxelela abekho ityeya kaThixo ngokusekelwe ezo zizathu kuphela, bayaba Uyalwa kakhulu. Oku ngathi kubhetele ngaphandle ibandla, engazi lutho, kunokuba ngaphakathi ecaweni yaye ecinga ukuba azi yonke into.
Nantso uthabathe wam ngokuvota njenge American Christian. Ndifuna ukukunika inkululeko ukwenza izigqibo zakho (kwaye ukuba kukho imfuneko, ubunzima ngabo), kwaye ngokwethu ukufikelela kuwe ukwazisa wena ku Krestu, eya kuwenza kumila kumbi kuni evela ngaphakathi-ngaphandle. Kodwa abezopolitiko akayi kuba nako ukwenza ukuba uluntu oko sinokukwenza njenge Church enamandla. Ngoko ke ndiya ukubacela ukuba umfundisi wam kunye nomongameli yam, Ndiza cela nje ukuba abe ngumphathi yam ukungena indlela yam. (Kwaye ukuba ucinga ngayo, ungafuni nabani na indlela yakho nantoni na oyenzayo ebomini, ngokomoya okanye zezwe.)
theknowledgecorner • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:24 mna • impendulo
Ayikho malunga abaviwa iinkolelo yokuziphatha, kodwa ezo miba iqonga yabo ukujongana iinkolelo zethu yokuziphatha njengabantwana bakaThixo. Eli qonga oko uza kuba ehlanganisa malunga nemithetho, imigaqo, etc. Umviwa bangatshintsha okanye ukuxhasa isimo ethile nje ukuzuza iivoti kunye bathandwe; Kodwa ke oko akuthethi yokuxelela indlela elilawulwa ngayo ilizwe. Jonga ulawulo lwangoku- kwakhe Waguquka “iinkolelo” ixesha eziliqela uninzi lwazo “yaveza” kungqamane igagasi uluvo ethandwayo. nokuba, eqongeni ayizange iguquke kwaye sele lubangelwe izimvo zoluntu. Benkululeko abagunye iqonga zobunene- kungakhathaliseki ukuba iinkolelo zabo. Okufanayo babebambelele. ngaphandle, njengoko sele ikhankanyiwe, umongameli eyintloko nani kule ndawo. Congress kwaye ulawulo esisityebi lizwe. Kufuneka sithandaze Oquqela kuThixo ukuba apho ivoti yethu iya. UThixo jika intloko “inkosi” ngendlela afuna ngayo ukuya; kunjalo, simele siqinisekise ukuba ivoti lethu ukuxhasa ezo nkqubo ukuba ichasene neLizwi. UThixo kuphela ingaphumeleli.
CherishJesusLuv • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 6:29 mna • impendulo
Ndiva ngathi nguThixo owabhala HIS-eli-….hehe….Ngoko ke uya Aline izinto ukuya indlela Uthe sibhalo. Ndicinga ukuba le nto uluvo lwam ukuba enoba sivota zomviwa ngcono ilizwi likaThixo baya kuma njengoko inyaniso nesiphelo iya kufika kanye njengoko ithi.
Ndisoloko unokucaphuka kunye ngabashumayeli nempumelelo ngenxa yobubi baye isekelwe kwi “khona imali.”….ndithi, “imali uThixo wayo.”
Yintoni endenza afune ukudanduluka xa ndibona abahlolokazi abafayo, abahluphekayo abantwana belambile, kunye nabantu abakhubazekile apho……Lo myalezo ayikho kubo? Nope ngayo abo achasene uThixo ufuna iindlebe zabo ukuba bawanyumbaz ukuze baqhayise of “zabo” ubutyebi. Ndiye ndacela uThixo malunga abashumayeli ezinjalo. Yaye uThixo wathi kum, wathi, “Zazise le yonke intsikelelo baya kuze babe, makhe andiqhayisi BMW ukuba isihlwele abantwana bam abalambileyo, aziyi kuphila ngonaphakade nam yaye oku kuya kuba bonke ngonaphakade baya kufumana.” Ngoko emva kokuba wandixelela ukuba nosizi aba bashumayeli ukuchuma…..Ngenxa enokuba BMW okanye Bentley yi ZONKE Uthi basaphila…..
I kwelinye icala Mthande iVangeli, nazi oku Ngokuba siswele, uyafa namahlwempu kwaye ayinanto yakwenza nemali. Ukuba isebe kaThixo. Uthi uya kongeza izinto “udinga.”
Mna zilambe kwaye sele emi kumgca silindele ukutya, ndeva umntu uthi kuthi, “Xa ukholwa kuYesu, kunye lwemostade ukholo ubuya nonke apha kuqhuba Bentley.” ubuyeleyo isisu sam…
Loo nto xa ndacela uThixo ngabantu efana nale ndoda kunye nezinye nabashumayeli nokuchuma. Kwakhona Masikhumbule oko UYESU ikuthethayo izinto…
mat 25:40	“Kwaye ke ukumkani uya kuphendula athi kubo, 'Ngokuqinisekileyo, Ndithi kuwe, kangangokuba wenza njengoko [kuyo] koyena mncinane waba bazalwana bam, wenze [kuyo] kum.’
CherishJesusLuv • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 7:00 mna • impendulo
mat 6:19-21	“Musa ziqwebeleni ubuncwane emhlabeni, apho inundu nomhlwa, nalapho amasela angaqhekeziyo ebe;”ziqwebeleni ke ubutyebi emazulwini, apho kungonakalisi nundu namhlwa, nalapho amasela angaqhekeziyo ebe. “Kuba apho bukhona ubutyebi benu, yoba lapho nentliziyo yenu yoba.